ठाउँठाउँमा किट अभाव हुँदा कोरोना परीक्षण रोकियो - Genuine Khabar
काठमाडाैं, वैशाख २२ : विराटनगर, भैरहवा, जुम्लामा प्रयोगशालामा किट अभावका कारण कोभिड–१९ को पीसीआर जाँच रोकिएको छ । भाइरस जाँचका लागि आवश्यक पर्ने ‘आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन’ किट सकिएपछि आइतबारदेखि पीसीआर टेष्ट रोकिएको हो । बाँकी ठाउँका प्रयोगशालामा पनि किट सकिन लागेकाे बताउँछन् ।
रुपन्देहीको भैरहवास्थित प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा किट अभावका कारण कोभिड–१९ को पीसीआर जाँच रोकिएको छ । शनिबार मात्रै रुपन्देहीको कोटहीमाई–१ का कोरोना संक्रमित युवाको दाइ र साथीको परिवारका १० जनाको परीक्षणसँगै किट सकिएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले जानकारी दिए ।
किट नहुँदा विराटनगरमा अटोमेटिक मेसिन बन्द
कोरोना परीक्षण गर्ने अटोमेटिक मेसिनमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट (आरएनए एक्ट्रयाक्सन किट) माग गर्दै कोशी अस्पतालले दुई पटक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र लेखिसक्यो । तर मन्त्रालयले किट नपठाउँदा कोशी अस्पतालको कोरोना परीक्षण ल्याबको अटोमेटिक मेसिन एक सातायता बन्द छ ।
प्रदेश १ मा मात्र ३१ जना कोरोना संक्रमित छन् । संक्रमण देखिएको स्थानमा परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने भए पनि रिएजेन्ट अभावमा संकलन भएका स्वाबको परीक्षण पनि ढिलो भएको मिश्राले बताइन् । ‘किट नहुँदा मेसिन चल्ने कुरा भएन । म्यानुअल गर्दा थोरै मात्र परीक्षण गर्न सकिन्छ’ उनले भनिन् ‘मन्त्रालयमा दुई पटक पत्र लेखेर पठाएका छौं, आउँछ होला ।’ कोशी अस्पतालले हालसम्म ६४१ जनाको स्वाब परीक्षण गरेको छ ।
किट अभावले जुम्लामा सुरु भएन परीक्षण
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा जडान गरिएको पीसीआर मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पीसीआर मेसिन जडान गरिए पनि किट अभावले सञ्चालन आउन नसकेको प्रतिष्ठानका हाडजोर्नी विशेषज्ञ एवं अस्पताल निर्देशक डा. मङ्गल रावलले जानकारी दिए । उनका अनुसार गएको मङ्गलबार प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि पीसीआर मेसिन जडान गरेको थियो ।
मेसिन सञ्चालनका लागि जनशक्ति सबै तयार रहेको भन्दै उनले किट आउनेबित्तिकै परीक्षण शुरु गर्ने बताए । यहाँको पीसीआर मेसिन ठूलो क्षमताको भएकोले यसले एकपटकमा ९६ जनाको स्वाब परीक्षण गर्न सक्नेछ ।
प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले प्रतिष्ठानका पूर्वउपकूलपति डा‍. पारसकुमार आचार्यको सहयोगमा सुर्खेतमा २०० किट आइपुगेको र त्यो लिनका लागि आजै प्रतिष्ठानको जनशक्ति सुर्खेत हिँडेको बताए ।
रजिष्ट्रार काफ्लेले प्रतिष्ठानले २७ लाख रुपैयाँमा पीसीआर मेसिन खरिद गरेको बताए । उनका अनुसार मेसिन सञ्चालन नहुँदा अहिले जुम्लामा कोरोना शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको शुरुमा आरडीटी परीक्षण गर्ने र थप शङ्कास्पद भएमा पीसीआर जाँचका लागि सुर्खेत पठाउने गरिएको छ । किट आउनेबित्तिकै परीक्षण कार्य तीव्र बनाउने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
रुकुम (पूर्व) मा किट अभाव हुँदा कोरोना परीक्षणमा समस्या
रुकुम (पूर्व) मा कोभिड– १९ को परीक्षणका लागि र्‍यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट (आरडीटी) किटको अभाव भएको छ । किट पर्याप्त नहुँदा कोरोना परीक्षण दुई सातादेखि रोकिएको छ । किट अभावकै कारण जिल्लामा शंकास्पद कोरोना संक्रमितको परीक्षण गर्न समस्या भएको छ ।
हालसम्म भारतलगायत अन्य मुलुकबाट १६२ नागरिक भित्रिएका छन् । देशका विभिन्न जिल्लाबाट भने एक हजारभन्दा बढी नागरिक भित्रिएका छन् । भित्रिने मानिसको संख्या धेरै भएपछि परीक्षण किट नहुँदा समस्या भएको हो ।
हालसम्म प्रदेश सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि १६० मात्रै किट पठाएको छ । ती किटले विदेशबाट आएका १२९ जनाको आरडीटी गरिएकामा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख यादवप्रसाद शर्माले बताए ।
यहाँका तीनै गाउँपालिकामा कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । सिस्ने गाउँपालिकाका १०३, भूमे गाउँपालिकाका १८ र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका आठ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको हो । त्यसमध्ये चार कैदी हुन् । बाँकीको किट अभावकै कारण कोरोना जाँच हुन सकेको छैन । हाल जिल्लामा २९ किट बाँकी छन् । ती किटले तत्काल कोही सम्भावित संक्रमित भेटिएमा परीक्षण गर्ने बताइएको छ । किट उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको प्रमुख शर्माले बताए ।
कपिलवस्तुमा आरडीटी परीक्षण किट अभाव
कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण परीक्षण गर्न जिल्लामा र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किट अभाव भएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको परीक्षणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर स्वास्थ्यकर्मीलाई समस्या भइरहेको छ ।
१४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म जिल्लामा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट चारपटक गरेर १ हजार १ सय २० थान किट मात्र आएको थियो ।
‘१० वटै स्थानीय तहलाई आवश्यकता सोधेर वितरण गरियो,’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र भगतले भने, ‘अहिले हामीसँग एउटा पनि किट बाँकी छैन । १० दिनअघि नै सकिएको हो ।’ किट अभावबारे निर्देशनालयमा जानकारी गराएको भए पनि कहिले पठाउने भन्ने टुंगो नभएको उनले बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल अटोमेटिक मेसिनमा प्रयोग हुने किट मन्त्रालयमा पनि थोरै मात्र रहेको बताउँछन् । मन्त्रालयमा भएका सामग्रीलाई आवश्यकता अनुसार वितरण गरिने उनले बताए ।
लकडाउन जेठ १० सम्म बढाउने सरकारकाे तयारी
आज पनि देशैभरका केही स्थानमा हावाहुरी, चट्याङ र वर्षाको सम्भावना